ပုရိသတို့ ရင်ခုန်သံမြန်သွားစေမယ့် နန်းအမရာရဲ့ ဆက်ဆီကျကျလေး ရိုက်ထားတဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပုရိသတို့ ရင်ခုန်သံမြန်သွားစေမယ့် နန်းအမရာရဲ့ ဆက်ဆီကျကျလေး ရိုက်ထားတဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး
လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ နာမည်ကြီး နေသူ လေး နန်းအမရာ က တော့ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ သူ တစ်ယောက်ဖြစ် သလို မော်ဒယ်လ် လောကမှာ လည်း နာမည် ကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် မလေး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ နန်းအမရာ က ပုရိသတွေ ကြားမှာတော့ အရမ်း ကို ရေပန်းစား နေတဲ့ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ကျစ်လျစ် သွယ်လျ ပြီး ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာတွေ့ရ ပါတယ် ။ သူမ ဟာ လတ်တလော မှာလည်း သူမ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်အလှ တရားတွေ ပေါ်လွင် အောင် ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို လေးကို တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ နန်းကတော့ အမြဲ ကို မရိုး နိုင်တဲ့ အလှတရား တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ညို့ယူ ထား တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အမြဲ လို ဖက်ရှင် အလန်းတွေနဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ကလည်း ပုရိသတွေ ကို ကြွေစေ ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တရားတွေ ကို အသား ပေးထား တဲ့ သူမ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ပြင်း တဲ့ ပုံရိပ်တွေ က လည်း ပုရိသ တွေ ကို ရင်တွေ တလှပ်လှပ် ခုန်သွားအောင် ဖမ်းစား နိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆီပို မရှိပဲ သွယ်လျ ကျစ်လစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့် ဘယ် ဖက်ရှင်နဲ့ မဆို လိုက် ဖက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီး တွက် နန်းအမရာရဲ့ မိမိုက် လွန်းနေ တဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ် … .
လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ နာမည္ႀကီး ေနသူ ေလး နန္းအမရာ က ေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္း တဲ့ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ သလို ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာကမွာ လည္း နာမည္ ႀကီးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ နန္းအမရာ က ပုရိသေတြ ၾကားမွာေတာ့ အရမ္း ကို ေရပန္းစား ေနတဲ့ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလို က်စ္လ်စ္ သြယ္လ် ၿပီး ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာေတြ႕ရ ပါတယ္ ။ သူမ ဟာ လတ္တေလာ မွာလည္း သူမ ရဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္အလွ တရားေတြ ေပၚလြင္ ေအာင္ ဆက္ဆီ က်က် ရိုက္ထားတဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယို ေလးကို တင္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ နန္းကေတာ့ အျမဲ ကို မရိုး နိုင္တဲ့ အလွတရား ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ ကို ညိဳ႕ယူ ထား တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ အျမဲ လို ဖက္ရွင္ အလန္းေတြနဲ႔ ရိုက္ခ်က္ေတြ ကလည္း ပုရိသေတြ ကို ေႂကြေစ ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ တရားေတြ ကို အသား ေပးထား တဲ့ သူမ ရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ျပင္း တဲ့ ပုံရိပ္ေတြ က လည္း ပုရိသ ေတြ ကို ရင္ေတြ တလွပ္လွပ္ ခုန္သြားေအာင္ ဖမ္းစား နိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဆီပို မရွိပဲ သြယ္လ် က်စ္လစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ေၾကာင့္ ဘယ္ ဖက္ရွင္နဲ႔ မဆို လိုက္ ဖက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီး တြက္ နန္းအမရာရဲ့ မိမိုက္ လြန္းေန တဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်း သဘောကျသွားမယ့် ရွှေသမီးရဲ့ Tik Tokဟာသ အလွဲ ဗီဒီယိုလေး